Halyeeyga Wright-Phillips oo u diray Raheem Sterling fariin ku aadan mustaqbalkiisa Man City – Gool FM
Dajiye October 27, 2021
(Manchester) 27 Okt 2021. Xidigii hore xulka qaranka England ee Shaun Wright-Phillips ayaa fariin u diray Raheem Sterling isaga oo ugu baaqay inuu la sii joogo Manchester City isla markaana uu u dagaalamo sidii uu dib ugu heli lahaa booskiisii kowaad ee kooxda.
Shaun Wright-Phillips ayaa sanado badan ku ciyaarayay maaliyada kooxda Manchester City, waxaana uu aaminsan yahay in Sterling uu awood u leeyahay inuu si joogto ah ugu ciyaaro City islamarkaana uu bedelo fikradiisa ah inuu baxo.
Haddaba sida uu sheegay wargeyska The Sun ee dalka England Xidigii hore xulka qaranka England ee Shaun Wright-Phillips ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Uma ciyaarin xilli ciyaareedkan sidii uu ahaan jiray, laakiin waxaan hubaa in waqtigiisa uu soo laaban doono, kaliya wuxuu u baahan yahay gool uu ku soo ceshado qaab ciyaareedkiisa.”
“Waa inaad eegtaa waxa uu qabtay 6 sano iyo wax ka badan si aad u aragto waxa uu awood u leeyahay inuu sameeyo, waxa uu sameeyay wax qabad muuqda, waxaana dareemayaa inuu door weyn ku yeelan doono mustaqbalka.”
“Waxaan doonayaa inaan arko isagoo qandaraaska u cusbooneysiiyay Manchester City, waxaa laga yaabaa inuu sheegay inuu doonayo inuu isku dayo inuu ka ciyaaro banaanka, laakiin waxaan qabaa inay City tahay kooxda u wanaagsan isaga, maadaama uu ku guuleysan karo koobab badan sannado badan oo soo socda.”